Xildhibaanadii Soo rogay Mowshinkii Kalsooni kala noqoshada Dr Saacid oo dib ula laabtay – SBC
Xildhibaanadii Soo rogay Mowshinkii Kalsooni kala noqoshada Dr Saacid oo dib ula laabtay
Xildhibaanadii Baarlamanka Soomaaliya ee Moqshinka ku keenay xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa kulankii lagu falan qeyn lahaa mowshinka ee lagu balamay maalmo ka hor oo maanta ku beegnaa waxay ka shaaciyeen in ay dib uga laabteen mowshinkaasi.
Xildhibaanadan oo kor u dhaafayay 90 ayaa ka sheegay kulanka baarlamanka in ka laabashada mowshinkan ay ka laabteen ay ka dambeysay ka dib markii ay arkeen sida shacabka iyo masuuliyiinta dowladuba uga jawaabeen markii la shaaciyay in xildhibaanadan ay soo rogeen mowshinkan.
Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya ayaa kulanka maanta shir gudoominayay waxaana markii la damacsanaa in loo guda galo shaqa howleedka maalintan maanta ah ee lagu eegi lahaa mowshinka ka dhanka ah xukuumada uu ku dhawaaqay in laga laabtay qodobkaas ayna soo gudbiyeen xildhibaanadii soo rogay in ay ka laabteen.
Waxa kale oo uu Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari intaasi ku darya in xukuumada federaalka ah ee Raiisul wasaare Shirdoon shaqadeeda sii wadankarto aysanna jirin wax mowshin ah oo ka yaala baarlamanka.
Isbedelkan deg dega ah ayaan si rasmi ah loo shaacin karin waxa ku dhaliyay xildhibaanada Baarlamanka waxaase dadka qaarkii ku macneeyeen in uu markii horeba ahaa mowshin lagu dhawaaqay un oo aan laga fekerin.